Iko kukura kweiyo nyowani yepamutemo Ubuntu flavour neUniity kunosimbiswa | Linux Vakapindwa muropa
Iko kuvandudzwa kweiyo nyowani yepamutemo Ubuntu flavour neUniity kunosimbiswa
Ubuntu Community haidi kusiya desktop yeUbuntu uye zvinoita sekunge Kubatana kucharamba kunesu neimwe nzira kana imwe. Vagadziri vakasiyana siyana uye nhengo dzeUbuntu Community vari kufamba kunogadzira nyowani yepamutemo Ubuntu flavour.
Iyi tavhu nyowani yaizove nayo Kubatana sedesktop huru, iko kungave kuenderera kweshanduro dzekare dzeUbuntu.
Chinhu chinonyanya kufadza panhau idzi ndechekuti Canonical yakapa kuenda-kumberi kune iyi nyowani yepamutemo flavour uye icharega iyo flavour ichishandisa iyo Ubuntu logo uye yekumaka, ndiko kuti, ichave iri yepamutemo Ubuntu flavour. Zvakare vatungamiriri vakasiyana siyana uye vanogadzira kubva kune mamwe epamutemo Ubuntu mapurojekiti vakazvipira kubatsira kugadzira uye kuchengetedza uku kwepamutemo kusimudzira.
Parizvino, nharaunda nevagadziri veiyi nyowani yepamutemo kuravira kuri kurongeka uye neizvi kukura kweiyo nyowani yepamutemo kuravira kuchatanga. Saka zvinoita sekunge Ubuntu 18.04 haizove neiyi nyowani yepamutemo flavour, asi isu tichazviona panguva inotevera 2018.
Mazita akati wandei ari kutotariswa nekuda kwekunaka kutsva, pakati peizvi inosimbisa zita reUbuntu Unity Remix, iro zita rinozoenderera pamwe nezvose zvirikuitika zvevamwe vatambi vepamutemo. Usakanganwa kuti Ubuntu Bugdie yakatanga nekanyorwa "Remix", pamwe neUbuntu Gnome kana Ubuntu Netbook Remix.
Kutevera kuziviswa kweCanonical kwekusiiwa kweUnited, kune maforogo mazhinji akaberekwa akatenderedza desktop iyi, asi zvinoita sekunge kugoverwa kunosanganisa Ubuntu uye Kubatana hakuzove neshungu dzakafanana, pamwe inyaya yekuti munhu wese akamirira mumwe munhu kuti aburitse kunhuhwirira kweUbuntu.
Ini pachangu ndinoda Kubatana uye pamwe ndinoshandisa ichi chitsva chepamutemo chinwiwa, nekuti ini handinyanye kuda iyo nyowani vhezheni yeGnome. Asi apo kuravira kwepamutemo kunosvika, Ini ndinonamira neUbuntu MATE, chinwiwa chepamutemo icho chisingaite chete kuti ndibvumire kushandisa Gnome yekare asi ini ndinogona zvakare kuisa kutaridzika kweiyo Kubatana kwekare. Chinhu chinoshanda kunyangwe chisingaratidzike senge.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iko kuvandudzwa kweiyo nyowani yepamutemo Ubuntu flavour neUniity kunosimbiswa
Asi zviri pamutemo here? Iye iye
Kangani iwe wakati "official kuravira"?